Amidy izao ny Doogee S98 Pro vaovao: ny finday avo lenta misy sary mafana sy fahitana amin'ny alina | Vaovao Gadget
Amidy izao ny Doogee S98 Pro vaovao: ny finday avo lenta misy sary mafana sy fahitana amin'ny alina
Isaac | 08/06/2022 14:48 | Finday
El Doogee S98 Pro Izy io dia iray amin'ireo finday mahatohitra indrindra ary manana endrika tena manintona. Raha miandry an'ity smartphone ity ianao dia tsy ho ela dia ho azonao eny an-tananao izany, satria amidy anio 8 jona 2022, ary raha tianao dia afaka mahita antsipiriany bebe kokoa ianao eto, ao amin'ny S98 Pro tranonkala ofisialy. Any no ahafahanao mahafantatra amin'ny antsipiriany rehetra, saingy efa nampoizinay fa fitaovana finday tena manaitra, tsy mahazatra, izay mihoatra ny endrika mahazatra amin'ny lafiny maro.
Ny Doogee S98 Pro dia voaaro amin'ny fiatrehana ny fiatraikany sy ny fitetezana, ary koa ny fananana fitaovana mahatsiriritra sy tena manaitra. Ohatra, manana fakan-tsary 20 MP ianao fahitana amin'ny alina miaraka amin'ny fahaiza-mijery thermal mba hahitanao izay rehetra ilainao amin'ny alina maizina indrindra. Ho toy ny tena Predator ianao miaraka aminy miaraka amin'ny InfiRay Dual Spectrum Fusion, miaraka amin'ny algorithm manan-tsaina kokoa, izay tsy vitan'ny hoe manome fahitana mafana, fa manao izany amin'ny avo roa heny amin'ny famahana ny mpifaninana akaiky azy indrindra ary amin'ny 25 Hz. Saingy tsy izany ihany. , Io fakantsary io koa dia mitambatra amin'ny sensor 48 MP hafa amin'ny famaritana avo lenta avy amin'ny marika Sony.
1 Famaritana ara-teknika momba ny Doogee S98 Pro
2 Aiza no hividianana azy ary amin'ny vidiny
Famaritana ara-teknika momba ny Doogee S98 Pro
Ankoatr'izay, ny Doogee S98 Pro vaovao dia tsy finday matanjaka manana fakan-tsary tsara ihany, manafina bateria lehibe ihany koa izy mba haharitra ora maro ny fizakan-tena tsy manahy momba ny fiampangana. Amin'ny ankapobeny, manana bateria an'ny 6000mAh Li-Ion miaraka amin'ny fanohanana ny fiampangana haingana amin'ny 33W ary koa ny famandrihana tsy misy tariby amin'ny 15W.
Amin'ny lafiny iray dia manana efijery lehibe izahay, misy a 6.3″ tontonana fikasihana ary vahaolana FullHD +. Ity tontonana ity dia voaaro amin'ny fivontosana sy ny scratches miaraka amin'ny teknolojia Corning Gorilla Glass, mba hahazaka ny fepetra faran'izay mafy indrindra. Ankoatra izany, dia natao hiasa any ivelany ihany koa izy io, hanohitra ny rano sy ny toetr'andro ratsy hafa mba hahafahanao mandray azy ho mpiara-dia aminao amin'ny fitsangatsanganana, fivelomana, amin'ny asa na izay mety aminao.
Eo ambanin'ny casing dia manana a MediaTek Helio G96 SoC, miaraka amin'ny CPU sy GPU mahery vaika marobe, ary miaraka amin'ny tsy latsaky ny 8 GB an'ny DDR4 RAM sy fitahirizana 256 GB izay azo ampitomboina hatramin'ny 512 GB noho ny slot karatra microSD azo jerena ao amin'ny pejy ofisialy. .
Izy io koa dia manana fiarovana IP voamarina, miaraka amin'ny fanoherana ny rano na dia manondraka azy hatrany amin'ny halalin'ny 1.5 metatra aza tsy misy fahasimbana. Izy io koa dia miasa tsara amin'ny fiaramanidina rano ary tafavoaka velona amin'ny toe-javatra faran'izay mafy noho ny azy taratasy fanamarinana mari-pahaizana miaramila MIL-STD-810H izay manaporofo ny maha-azo itokiana sy ny fahamendrehany. Tsy isalasalana fa vokatra tsara ampiasaina amin'ny varavarana mankany ivelany.
Raha resaka fifandraisana dia misy ny NFC, 4G, ary mifanaraka amin'ny tamba-jotra misy GPS toa an'i BeiDou, GLONASS, GPS ary Galileo. Ankoatra izany, ny rafitra fandidiana voafidy dia tsy mety ho vao haingana, satria io no Android kinova 12.
Aiza no hividianana azy ary amin'ny vidiny
Farany, tokony ho fantatrao fa ny Doogee S98 Pro vaovao dia tsy terminal lafo, lafo be. Mitentina eo amin'ny 439 dolara amerikana eo ho eo izany, ary azo jerena eran-tany amin'ny vidiny mirary $329 tao anatin'ny 5 andro voalohany. Raha tianao izany dia azonao atao ny mahazo azy mora kokoa ho an'ireo mpividy 100 voalohany, izay afaka mitondra azy any an-trano amin'ny $299 fotsiny, izay tena lafo. Azonao atao ny mahita izany amin'ny mpivarotra toy ny AliExpress, doogeemall, Linen, sns.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Amidy izao ny Doogee S98 Pro vaovao: ny finday avo lenta misy sary mafana sy fahitana amin'ny alina
Facebook sy Twitter: fahasamihafana lehibe sy fitoviana
Ahoana ny fomba hamerenana ny tenimiafina Gmail